Ny hevitr’i Frederick Noronha amin’ny fankatoavana bilaogera ao India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Oktobra 2018 13:50 GMT
(Nizara lahatsoratra tamintsika momba ny tombatombana fa mety hanomboka hahazo fankatoavana avy amin’ ny governemanta Indiana ireo bilaogera ilay mpanao gazety indiana Frederick Noronha. Misaotra, Frederick!
BILAOGERA, HIDITRA– NA TAFIDITRA–AO INDIA?
Avy amin'i Frederick Noronha
GOA, India, 23 May: Mety miandry fankatoavana ofisialy any an-toeran-kafa manerantany ny bilaogera, fa tsy any India, angamba. Niteraka ‘tsia’ haingana ny filazana tsy nampoizina avy amin'ny governemanta federaly ao New Delhi, maneho ny mety ho fankatoavana ofisialy ho an'ireo bilaogera.
Mbola ao anatin'ny fahazazany ireo bilaogy Indiana, na dia tsy mitsahatra taterina ao amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra aza ny fitomboan'ny rindrambaiko ara-tsosialy. Angamba ny fihisarana amin'ny fidirana aterineto, any amin'ny ankamaroan'ny toerana ivelan'ny tanàn-dehibe, no tena melohina eto. Saingy nipoitra vaovao lehibe vao haingana ny famahanana blaogy, raha nanakatom-pivarotana ny bilaogy malaza iray mpiresaka media rehefa naharay taratasy fitoriana fanalam-baraka avy amin'ny vondron-gazety lehibe indrindra any India, The Times of India. Namoaka ny tantara haingana ny gazety ‘Critique’, izay navoaka avy ao Nagpur any afovoan'i India, izay mitondra ny lohateny hoe ‘Journos V / s Bilaogera; Tena mila miady ve izy ireo?
Nivoaka niaraka tamin'ny tantara nitondra ny lohateny hoe, “Ry bilaogera, mivonòna hiasa ho an'ny governemanta” ny tatitra iray tao amin'ny gazety ara-toekarena lehibe Economic Times !”
Ity lahatsoratra ity dia nanoso-kevitra fa “sambany eo am-pamolavolana fitsipika hanomezana alalana ireo mpanao gazety antserasera sy bilaogera i India, mijery ny zava-misy marina momba ny tontolo mivoatra eo amin'ireo mpanoratra anaty aterineto izay afaka mamolavola hevitra ary efa nahazo alalana hiditra amin'ny lalantsaran'ny tranom-panjakana ao amin'ny firenena toa an'i Etazonia. ” Hoy i Vickram Crishna, injeniera teo aloha lasa mpanao gazety sady mpanentana ho amin'ny fametrahana demokrasia amin'ny onjam-peo namaly haingana. Tao amin'ny lahatsoratra ao amin'ny BytesForAll, nanome ny antony marim-pototra momba ny antony mety hahatonga azy ity ho soavaly Trojan (de troie) izy, any amin'ny firenena izay efa nampiharina ela ny fanaraha-maso lalina ny media.
Nanoratra i Crishna monina ao Mumbai fa: “Raha ny tena izy dia tsy mitovy hevitra velively amin'izany aho. Ny fitadiavana ‘fankatoavana’ dia toy ny mandeha any amin'ny tsenan'ny legioma hividy hena. Ny ampahany betsaka amin'ny soatoavin'ny fiarahamonina dia ny hoe olom-pirenena mahaleotena ny bilaogera, tsy mangataka fankatoavana avy amin'iza na iza mba hanome fomba fijery tampoka sy “maha-olon-tsotra” momba izao tontolo izao. “
Crishna nanampy hoe: “Ny ezaky ny governemanta hitarika ny bilaogy ao amin'ny “mahazatra (daholobe)” dia tsy hoe fikasana diso toerana fotsiny fa fikasana tsara, na ratsy kokoa, fikasana hifehy araka ny lalàna amin'ny alalan'ny ‘fankatoavana.’ Raha hilaza ny lahatsoratra feno voalaza etsy ambony, dia “Araka ny filazan'ny manampahefana Indiana, dia lasa fanambarana ara-politika any amin'ny firenena maro hafa ny bilaogy- toy ny fifidianana tany Etazonia sy tany Angletera – ary mila miomana amin'ny toe-javatra toy izany i India ary toy izany indray, “ny hevitra dia ny mahafantatra ny tena izy amin'ny hosoka ary mankasitraka ireo izay maniry tokoa ny hitondra fahasamihafana. Homena alalana hiditra amin'ny alàlan'ny fankatoavana izy ireo.”
Naneho hevitra mitovy amin'izany i Dina Mehta tamin'ny Resadresaka tamin'i Dina. Hoy izy hoe: “Etsy ankilany, faly aho fa raisina ho matotra ny bilaogera, etsy andaniny, fanontaniana maro sy tahotra sasany no mihazakazaka ato an-tsaiko …. Moa ve mila izany fankatoavana izany avy amin'ny governemanta ny bilaogera? Mila izany ve izy ireo? Inona no tombontsoa? Inona no takalony? Mety ho very ve ny fahalalaham-pitenenantsika? Karazana alalana sa fiarovana sa fifehezana ity? Ho lasa mpitondratenin'ny governemanta ve izy ireo? Hiteraka fifaninanana eo amin'ireo bilaogera Indiana ve izany, ao anatin'ny hazakazaka adala ho an'ny laissez-passer (fidirana malalaka) ho an'ny gazety, izay ahitana hatrany ny fiarahamiasa sy ny finamanana ankehitriny? “
Nahazo fitokisana noho ny anjara andraikiny tamin'ny fitantarana ny tsunami tamin'ny 26 Desambra 2004 manerana an'i Azia ny bilaogy ao India. Ato ny tazana mahaliana momba ny fibilaogina ao India.
Vao haingana i Rajesh Jain, iray amin'ireo bilaogera malaza indrindra ao India izay mitantana ny bilaogy Emergic.org no nametraka toro-hevitra hanampiana ny olona hanomboka hibilaogy.
Toerana tsara hitadiavana ny bilaogy Indiana ny India.Blogstreet.Com's Top 100.